Kenya oo laga Cabsi qabo in ay kordhiso bandowga Gaarisa – Radio Daljir
Kenya oo laga Cabsi qabo in ay kordhiso bandowga Gaarisa
Maajo 20, 2015 4:42 b 0
Arbaco, May 20, 2015 (Daljir) — Wasiirka Arrimaha gudaha ee dalka Kenya, Joseph Nakisserry ayaa difaacay go’aankii uu muddo hal bil ah ugu kordhiyey bandowga saaran Gobalka Garissa.
Waxa u usheegay inuu Tallabadaasi u qaaday, kadib, markii ay Hay’addaha Ammaanka ee Garissa awoodi kari waayeen inay soo ururiyaan macluumaadka looga hortegi karp Kooxaha loogu yeero Argagixisadda, waa sida uu hadalka u yiri.
“Tallaabooyinkayga waa kuwo sharci ah, iyadoo aysan weli deganaansho ka jirin Gobalka, kadib, weerarkii Garissa” ayuu ku dooday Wasiirka Arrimaha Gudaha Kenya.
Hadalkiisa ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo ay Xildhibaanadda ka soo jeeda Garissa ku hanjabeen inay isaga mooshin ka geyn doonaan Barlamaanka Kenya oo la xiriira Bandowga cusub ee uu ku soo rogay Garissa.
Danjire Kay oo ka Digay khatarta Al-shabaab Marka la gaaro doorashada 2016-ka